सरकार ! कुन मानसिकताले ड्युटी गर्न जालान् स्वास्थ्यकर्मी ? | My News Nepal
काठमाडौं । भदौ ६ गते शनिबार । सधैं झैं ड्युटी जाने तयारीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी । देशकै केन्द्रबिन्दु संविधानसभा भवनको मुस्किलले पैदल १० मिनेटको दूरी । बानेश्वर मिलनचोक, बलभद्र मार्गस्थित लर्ड बुद्ध ब्वाइज एण्ड गल्र्स होस्टल ।
विगत ६ महिनादेखि कोरोना सन्त्रासका कारण खालीरहेका होस्टलको भवनमा आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी भएकै कारण रोहित रानाले स्वास्थ्यकर्मीलाई बस्न दिने निर्णय गरे, त्यो पनि बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालकै समन्वयमा । यस महामारीका बेला डर र त्रासबीच लामो समयसम्म ड्युटीपछि खाली रहेको छोटो समय व्यतितका लागी होस्टलको बसाइ रोजेका थिए ती स्वास्थ्यकर्मीहरुले ।
जुन जनताले आफ्नो बासको खेदो खनेका छन्, तीनै जनता संक्रमित भएर उपचार गर्न जाँदा कस्तो किसिमको मनोभावना पैदा होला स्वास्थ्यकर्मीमा ? जुन व्यक्तिले आफ्नो बास खेद्न आइपुगेका छन्, त्यही व्यक्तिको उपचारमा कुन औषधी चलाउलान् स्वास्थ्यकर्मीहरुले ?
तर शनिबार बिहान अचानक होस्टल अगाडि देशकै केन्द्रबिन्दुमा घर रहेका ‘बुद्धिजीवी’ बानेश्वरबासीले होस्टल सञ्चालकसँगै स्वास्थ्यकर्मीलाई तथानाम गाली गलौच गरे । उनीहरुले होस्टलमा स्वास्थ्यकर्मीलाई बास दिएको आरोपमा सञ्चालकमाथि खनिनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत गालीगलौच गर्न पछि परेनन् ।
स्थानीय बुद्धिजीवी ठहरिएका केही व्यक्तिको उक्साहटमा लागेर स्थानीयहरुले जनताको जीवन बचाउनका लागि रातदिन नभनेर सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई बास बसेकै ठाउँमा गाली गर्न पुगे । राजधानी जस्तो ठाउँमा त स्वास्थ्यकर्मीप्रति यस्तो व्यवहार गरिन्छ भने देशका अन्य स्थानमा कस्तो गरिएला ? लामो ड्युटीपछिको छोटो समय बिताउने विश्रामस्थलमा यस किसिमको मानसिक तनावबाट कसरी मुक्त पाउने ? मानसिक सँगसँगै शारिरीक सुरक्षाको ग्यारेन्टी खै ?
विश्वभर करोडौं संक्रमित र लाखौंले ज्यान गुमाइरहेको कोरोना भाइरसका कारण पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि हजारौं संक्रमित भइसकेका छन् भने सयौंले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ । नेपाल जस्तो स्वास्थ्य सेवा नाजुक भएको मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मीप्रति गरिएको यस किसिमको व्यवहारबाट कसरी उचित उपचार पाउन सकिएला ? कुन मानसिकताले स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गर्लान् ?
जुन जनताले आफ्नो बासको खेदो खनेका छन्, तीनै जनता संक्रमित भएर उपचार गर्न जाँदा कस्तो किसिमको मनोभावना पैदा होला स्वास्थ्यकर्मीमा ? जुन व्यक्तिले आप्mनो बास खेद्न आइपुगेका छन्, त्यही व्यक्तिको उपचारमा कुन औषधी चलाउलान् स्वास्थ्यकर्मीहरुले ?
त्यसैले सरकारले सम्भव भएसम्म यस महामारीको समयमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको शारिरीक एवं मानसिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नसक्नुपर्दछ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने केही हदसम्म स्वास्थ्यकर्मी पनि मानसिक रुपमा सबल र सुरक्षित महसुस गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
सम्भव भएसम्म अस्पताल क्षेत्र नजिकका होटलहरुमा व्यवस्था गर्न सकियो भने स्वास्थ्यकर्मीहरु मानसिक एवं शारिरीक हिसाबले सुरक्षित महसुस गर्न सक्दछन्, यदि त्यो सम्भव छैन भने कार्यक्षेत्र नजिकका सरकारी भवन एवं स्कूल कलेजका भवनलाई केही समयका लागि भए पनि बसोबासस्थलका रुपमा प्रयोग गर्दा केही हदसम्म यस्ता ‘कूकृत्यहरु’ समाचार बन्दैनन् होला ।
सुदीन शर्मा २०७८ असार ७ गते
सुदीन शर्मा २०७८ असार ६ गते